Afaka mifaninana amin'ny Google amin'ny orinasa lehibe ve ianao? | Martech Zone
Afaka mifaninana amin'ny Google amin'ny orinasa lehibe ve ianao?
Alahady 22 Janoary 2017 Douglas Karr
Alohan'ny hahasosotra ahy amin'ity lahatsoratra ity dia mba vakio tsara izany. Tsy milaza aho hoe Google dia tsy loharanom-pahalalana azo antoka na tsy misy ny famerenam-bola amin'ny fampanjariam-bola amin'ny paikady fikarohana karama na organika. Ny tiako holazaina ato amin'ity lahatsoratra ity dia ny orinasa lehibe manjakazaka tanteraka amin'ny valin'ny fikarohana voajanahary sy karama.
Fantatray hatrany fa fividianana vola isaky ny tsindry dia fantsom-panjakan'ny vola, ny maodelin'ny orinasa. Ny fametrahana dia handeha hatrany amin'ny mpandoa avo indrindra. Saingy tsy nitovy ny paikadin'ny fikarohana biolojika. Nandritra ny taona maro, afaka namokatra atiny mahaliana sy mahatalanjona izahay ary nahazo valiny tamin'ny a laharana 1 mitana laharam-pahamehana mifaninana amin'ny Google. Lasa ireo andro ireo.
Ny namana tsara Adam Small dia mihazakazaka a sehatra marketing marketing. Vao tsy ela akory izay tany New York City izy Inman Connect. Rand Fishkin avy any Moz dia mpandahateny ary nanambara tamin'ny famakafakana nataony fa sehatra 5 no mitana ny laharam-pahamehana amin'ny fikarohana 5 an-tampon'ireo tsena 25 ambony any Etazonia.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha toa ianao ka orinasa miharo fananana manana traikefa zato taona any amin'ny iray amin'ireo tanàna ireo, dia mahatsiravina ny fahafahanao milahatra. Tsy toy izao ny taloha. Ny laharan'ny fikarohana organik'i Google dia fotoana iray ahafahan'ny orinasa manangana votoaty mahatalanjona ary hita sy voalahatra tsara. Tsy milaza aho hoe tsy nisy ezaka izany, naharitra taonina ny asa… saingy azo atao izany.
SimilarWeb dia namoaka ny Loka Momentum ho an'ny 2016. The SimilarWeb Momentum Awards dia manaiky ny tranokala any Etazonia izay naneho fandrosoana miavaka tamin'ny sokajy an-tserasera tamin'ny 2016. Ireo 39 mpandresy tamin'ny sokajy 13 dia nanatsara ny fahombiazany Laharana mitovyWeb - isa algorithmika izay manaparitaka tranonkala maherin'ny 80 tapitrisa amin'ny alàlan'ny refin'ny fifamoivoizana sy ny fidirana an-tsehatra.
Ao anatin'ny famakafakana ireo dia ho hitanao fa ny fikarohana dia singa lehibe hamaritana ireo orinasa manana ny tanjany lehibe indrindra. Ity misy ny loka azon'izy ireo:
SOKAJY 1st 2nd 3rd
Toeram-pivarotana an-tserasera wish.com samsclub.com kmart.com
Consumer Electronics frys.com bestbuy.com bhovotovideo.com
Agence momba ny dia an-tserasera katezemania.com travelocity.com expedia.com
Chains amin'ny hotely marriott.com choicehotels.com ihg.com
Serivisy famandrihana hotely hotel.com airbnb.com trivago.com
Airlines jetblue.com aa.com fanahy.com
Insurance statefarm.com mandroso.com geico.com
Banking citi.com faritra.com navyfeder.org
Mividy fiara carmax.com autotrader.com fiara.com
Vaovao sy haino aman-jery fivethirtyeight.com www.soloformas politico.com
Vaovao momba ny fandraharahana bloomberg.com money.cnn.com foxbusiness.com
Sintomy ny tatitra manasongadina nyWWW's for 2016
Na dia misy orinasa vitsivitsy aza tsy mahafehy an'izao tontolo izao dia orinasa goavambe misy paosy lalina izay manana marketing nomerika an-tserasera, tarihin'ny laharan'ny fikarohana ara-organika azy ireo. Ireo orinasa ireo dia afaka mividy ny paikady omni-channel, ao anatin'izany ny atiny matanjaka mifanaraka amin'ny fampiroboroboana be karama, tranokala be fanatsarana ary marketing amin'ny influencer Lafo izany fitambarana izany - nefa manimba ny fifaninanana.
Izany no antony tsy maintsy ampiasain'ny orinasa sy mpanonta kely kokoa ny fahaizany manararaotra ny tombotsoany. Rehefa mijery ireo orinasa manjaka amin'ny Google ianao dia tsy tokony hanahaka azy ireo. Mila manavaka ny tenanao amin'izy ireo ianao, na dia mitady hanatanteraka fampielezan-kevitra izay paikady atiny tsy atahorany mihitsy aza. Ny mpihaino anao dia mbola noana noho ny zavatra hafa - ahoana no ahafahanao tsy hitovy? Raha tsy afaka mitana ny laharam-pahamehana amin'ny Google ianao, farafaharatsiny mbola afaka miankina amin'ny sosialy ianao hanamafisana ny hafatrao.
Izany no antony ny paikady ifotony ho an'ny mpanjifantsika dia ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny an-tsary, sary mihetsika, ary fotsy fotsy. Ny atiny voadinika tsara, tsara tarehy ary sarobidy dia hanohy hitarika ny saina sy ny fahefana amin'ny orinasao. Mety tsy manana laharana ianao, fa hozaraina sy ho hitan'ny mpihaino mifandraika tadiavinao ianao.
Tags: 2016saosy mpandraharahaGoogle +inmanmari-pankasitrahana momentumMozfikarohana biolojikafikarohana karamahodi-trondroambonyvarotra tranosimilarweb
Ny SEO Iceberg: Mizaha zava-miafina misy fiatraikany amin'ny fikarohana ara-organika
Trends momba ny famolavolana tranonkala sy ny traikefan'ny mpampiasa 2017